🥇 ▷ O Galaxy Note 10 aad ayey qaali u tahay? Sidee ku saabsan S10 + at 700 €? ✅
O Galaxy Note 10 aad ayey qaali u tahay? Sidee ku saabsan S10 + at 700 €?
Samsung ayaa billowday Ogosto 7-deeda cusub ee Galaxy Note 10 iyo Note 10+, laba taleefanno gacmeed oo ay u badan tahay kuwa casriga ah kuwa ugu awoodda badan suuqa. (Horey u-dalbashada ugu dambayn Ogosto 22-deeda).
Si kastaba ha noqotee, moodalka ugu jaban (Xusuusin 10) Qiimuhu waa 1000 €, oo uu qofkasta runtii doonayo (Xusuusin 10+) oo ku kacaya € 1129. Taas oo runtii aan run ahayn, oo aad u soo jiidata jeebka macaamiisha!
Taasi waxay dhahday, haddii aad rabto inaad sii waddo inaad khibrad u hesho bandhigga AMOLED iyo sumadda tayada leh ee Samsung. Had iyo jeer waad eegi kartaa taleefannada casriga ah ee la bilaabay Febraayo, Galaxy S10 iyo Galaxy S10 +. (Ama xitaa S10e haddii aad leedahay miisaaniyad aad u kooban.)
Sidee ku saabsan iibsashada Galaxy S10 + halkii laga isticmaali lahaa hal note 10 ama note 10+?
Ugudambeyn, taleefannada casriga ah ee lasii daayay bisha Febraayo kama sii dambeeyaan Qoraalka 10 ee naqshadeynta, shaqeynta, xitaa waxqabadka… Farqiga weyn ayaa xitaa ku jira qiimaha! Ka dib markii ragga da’da weyn ee ‘S10’ ay hadda ka jaban yihiin
Lix bilood ka dib markii la bilaabay taleefanka gacantu oo calaamad u ahaa sannad-guuradii tobnaad ee soo gelitaanka Samsung ee ku soo kordhay adduunka Android. O Galaxy S10 iyo S10 + ayaa si weyn hoos ugu dhacay qiimaha, iyadoo S10-ku uu ku fadhiyo qiyaastii $ 650 iyo S10 + oo qiimihiisu qiyaas ahaan yahay $ 728
Marka haddii aad dhacday inaad aqriso anaga dib u eegis ilaa Galaxy S10 +, waad ogtahay inaan gebi ahaanba jeclaan jirnay taleefanka casriga ah. Aalad si fudud u qaadatay fashilkii ahaa S9 ee 2018, oo u rogay taleefanka gacanta oo ahaa neefsasho dhab ah oo hawo nadiif ah suuqa.
Marka la soo koobo, Galaxy S10 + waa taleefan casri ah oo nacasnimo leh! Waxay u badan tahay inuu weli yahay midka ugu fiican suuqa, gaar ahaan hadda inay aad uga jaban tahay!
Intaa waxaa sii dheer, waxaad had iyo jeer dooran kartaa Galaxy S10e, oo horey loo heli karo ~$ 500.